အကောင်းဆုံးကြောက်စရာစက်ရုပ်ဂိမ်းများ - ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ (စာရင်း) - ဂိမ်း
အကောင်းဆုံးကြောက်မက်ဖွယ် Roblox Games 2020 - ကစားရမည်
Roblox သည်globalရာမကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သန်းပေါင်းများစွာသောဂိမ်းကစားသူများသည်၎င်းတို့၏ဂိမ်းကစားခြင်းစွမ်းရည်ကိုစွဲလန်း။ သုံးစွဲသူမှထုတ်လုပ်သည့်သုံးဖက်မြင်ကမ္ဘာကြီးတွင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းချိတ်ဆက်ထားသောနေရာဖြစ်သည်။ ကစားသမားတစ် ဦး သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိမည်သည့်သုံးစွဲသူမှမဆိုစိတ်ကူးယဉ်ကစားနိုင်သောဂိမ်းများကိုကစားနိုင်ပြီးသူ့ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းကိုတည်ဆောက်နိုင်ပြီးအခြားသူများနှင့်ကစားရန်မျှဝေနိုင်သည်။ Roblox ပေါ်ရှိဂိမ်းအမျိုးအစားနှင့် developer များ၏စိတ်ကူးနှစ်မျိုးလုံးသည်အတိုင်းအဆမရှိဖြစ်သည်။
Roblox ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်တစ်လလျှင်ကစားသမား ၆၄ သန်းအထိရှိပြီးထို platform ပေါ်တွင်အကောင့် ၁၇၈ သန်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းကို Android နှင့် IOS တွင်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ ၎င်းတို့၏တက်ဘလက်များ၊ ပီစီ၊ Xbox One သို့မဟုတ်အမေဇုံစက်များပေါ်တွင်ဂိမ်းကစားနိုင်သည်။
ရာပေါင်းများစွာအကြား Roblox ရှိဂိမ်းများ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသော Roblox ဂိမ်းများသည်သင်၏လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်သင်၏ adrenaline ကိုနောက်အဆင့်သို့တွန်းပို့နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာအကောင်းဆုံး Roblox ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်ကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်သင်နေရာမှန်မှာရှိနေပါတယ်။ ဤတွင်ထိပ်ဆုံး Scariest Games ၁၀ ခုနှင့်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ချက်အချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
ကြည့်နေ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာအခမဲ့ Robux ရလား။ ငါတို့နောက်သို့လိုက်လော့ Roblox လမ်းညွှန်များ ။
အကောင်းဆုံး Roblox ကြောက်စရာဂိမ်းများစာရင်း -
၎င်းသည်လှုပ်ရှားမှု၊ ဂိုးနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုနှစ်သက်သောကစားသမားများအတွက်အဆုံးစွန်သောကစားသမားဖြစ်သည်။ ဒီဂိမ်းကစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အခြေအနေများစွာကိုတွေ့နိုင်ပြီးသင်ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်လောက်တဲ့အလေးသာမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၇ အမေရိကန်သဘာဝလွန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို အခြေခံ၍ Dead Silence ဟုခေါ်သည်။
ဒီခေါင်းစဉ်မှာဂိမ်းပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ သင်သူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားနိုင်ပြီးဂိမ်းကိုပျော်ရွှင်စွာကစားနိုင်သည်။ သင်ကြောက်စရာဇာတ်လမ်းများကိုလိုချင်ပါကဤသည်သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ သငျသညျရှင်းလင်းသောအရင်းအမြစ်များကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ရှင်သန်မှု mode ကိုလည်းရှိပါသည်။ ကစားသမားများသည်သက်တမ်းအရှည်ဆုံးအသက်ရှင်ရန်လိုသည်။
၎င်းတွင်ပထမ ဦး ဆုံးအမြင် (FPP) စနစ်ရှိပြီးကစားသမားများသည်အခြားကစားသမား ၄ ယောက်အထိကစားနိုင်သည်။
ဂိမ်းတွင်ခုန်တွှင်ခြိမ်းခြောက်မှု ၁၅ ခု (အဓိက ၄ ခု၊ အသေးစား ၁၁ ခု) ရှိသည်။ ၄ ချက်နှုန်းဖြင့်ခုန်ကြောက်ရွံ့မှုနှုန်းရှိသည်။
၎င်းသည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသောစွန့်စားရသည့် Roblox ဂိမ်းဖြစ်သည်။ သင်နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေတစ် ဦး သည်တိုက်ခန်းအဆောက်အ ဦး မှလွတ်မြောက်ရန်လိုအပ်သည်။ အဆောက်အ ဦး ရဲ့ထိပ်ကိုသွားတဲ့လမ်းကအရမ်းကိုထူးဆန်းတယ်။ သင်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာသောအတားအဆီးအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်သည်။ ဂရပ်ဖစ်ဂိမ်းအတွက်အတော်လေးလိုအပ်ပေမယ့်မိတ်ဆွေတစ် ဦး နှင့်အတူပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများသည်အခန်း ၇၀၅ ကိုရောက်ရန်ကြိုးစားသည့်အချိန်သည်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။
မြေပုံကိုလှည့်ပတ်ပြီးသင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်အတူသတ္တမထပ်သို့ရောက်ရှိရန်သင်ကြိုးစားရမည်။ မည်သည့်ပြissuesနာကိုမှသင်မရင်ဆိုင်ရပါ။ အဆိုပါဂိမ်းအတော်လေးနှေးကွေးသည်နှင့်သင်၏အချိန်အချို့ကိုယူပါလိမ့်မယ်။ဂိမ်းကစားနေစဉ် Discord အသံချက်တင်ဖြင့်သင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရှိသည်။
လှုပ်ရှားမှု၊ စွန့်စားမှု၊ လူတစ် ဦး စုံထောက်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတ်လန့်မှုများသည်ပေါင်းစပ်။ မှောင်မိုက်။ လေးလံသောအဖြစ်အပျက်နှင့်အတူပါလာခဲ့သည်။
ဒါဟာ zMadZeus တီထွင်တဲ့ထိတ်လန့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်လှေကားသည်ကျပန်းအထပ်တစ်ခုတွင်ရပ်တန့်ပြီးကြမ်းပြင်တစ်ခုစီသည်မတူညီသောထိတ်လန့်ဖွယ်မြင်ကွင်းကိုကမ်းလှမ်းသည်။ လူသတ်သမားအသစ်များကိုယခုဂိမ်းတွင်ထပ်မံထည့်သွင်းပေးပြီး၎င်းကိုစွဲမက်စရာဖြစ်စေသည်။ Horror Elevator ကိုဖန်တီးသူတွင်အခြားဘေးထွက်ဂိမ်းများစွာလည်းရှိသည်။
ဤရွေ့ကားထိတ်လန့်ဂိမ်း၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်စူးစမ်းချင်သူဂိမ်းများအတွက်စံပြဖြစ်ကြသည်။ ဒီစိတ်ကူးခေါင်းစဉ်ကိုစမ်းကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ် ဒီဂိမ်းဟာအင်တာနက်ပေါ်ကကျပန်းလူများနှင့်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။
၂၄ ထပ်ရှိပြီး၊ ကစားသမားသည်နောက်ကျပန်းကျပန်းအခြေသို့တိုးလာသည်နှင့်အမျှအခက်အခဲအဆင့်မှာလည်းတိုးလာသည်။
ဆာဗာသည်ကစားသမား (၁၀) ယောက်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းနေရာချပေးနိုင်သည်။
၎င်းသည် Egroce မှတီထွင်ထားသောတစ် ဦး တည်းသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောဂိမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထူးဆန်းသည့်မျက်နှာ -In-the-mirror-illusion ကိုတုပရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာအကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့ Obby tropes ကိုယူပြီးသူတို့ကိုအချိန်တိုင်းထူးခြားစွာလှန်ပစ်လိုက်တဲ့စိတ်ကူးဂိမ်းတစ်ခုပါ။ Roblox ရှိထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းများကိုထင်ဟပ်ပြသမှုသည်မှန်သည်။
အခန်းထဲရှိအလင်းများကိုမှိန်မှိန်သောအခါသင်ပျော်စရာကောင်းသည်။ အသံတွေကိုသင်စတင်ပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲကလေးတွေမကစားခင်သတိပေးချက်တွေပေးပါတယ်။
ဒါဟာလှပသောရောင်ပြန်ဟပ်မှု၏ဖြစ်ရပ်ကိုသရုပ်ဖော်သည်။ ကစားသမားတစ် ဦး သည်ကျော်လွှားရန်ခက်ခဲသောစိန်ခေါ်မှုအသစ်များကို ဦး တည်စေသည့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ စဉ်းလဲသောအတားအဆီးလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်သန်းသွားရန်လိုအပ်သည်
နောက်ဆုံးဂိမ်း script ကိုအဓိက script ရဲ့ extension ကိုသောကုဒ်နံပါတ် 1000+ ပါဝင်ပါသည်။ ကစားသမားတစ် ဦး သည် mirror-side တွင်ဝှက်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးကွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြသခြင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းဂုဏ်သတ္တိများကိုမည်သို့မည်ပုံကိုင်တွယ်နိုင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။
5. မှောင်မိုက်အိမ်၌တစ် ဦး တည်း
ပုဂ္ဂလိကစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတစ် ဦး သည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောမော်တော်ယာဉ်လူသတ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မြို့ငယ်လေးသို့ သွား၍ မိသားစုနှင့်ပတ်သက်သောမှောင်မိုက်သောလျှို့ဝှက်ချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောပြဇာတ်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ Roblox ၏ကြောက်စရာဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်သောအမှောင်အိမ်ထဲတွင်တစ်ယောက်တည်းရှိနေသည်။
၎င်းသည်မကြာသေးမီကဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ရုပ်ပုံများကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ဒါဟာရပ်ရွာထဲတွင်အတော်လေးရေပန်းစားသည်။ ပုံပြင်ကိုလေ့လာပြီးနောက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိနိုင်သည်။ ဒါဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ကစားသမား ၂၀ အထိတစ်ပြိုင်နက်တည်းကစားခွင့်ပေးမှာဖြစ်လို့သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။
ကစားသမားတစ် ဦး သည်၎င်းတို့၏အလုပ်များ၏အခက်အခဲပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောတံဆိပ်များကိုရရှိနိုင်သည်။
၎င်းသည်တစ်ချိန်ကမိုင်းလုပ်သားများဖြစ်သော်လည်းဤသတ္တဝါများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသောဖုတ်ကောင်များကျူးကျော်ဝင်ရောက်သည့်သတ္တုတူးဖော်ရေးစက်ရုံတခုကိုပြသသည်။ သူတို့သည်သင့် ဦး နှောက်ကိုစားချင်ကြသည်။ သင်လုပ်ရမည့်အရာမှာ၎င်းတို့အားသင်၏စိတ်ကိုနဂိုအတိုင်း ထား၍ ပြန့်ပွား။ ဤနေရာမှလွတ်မြောက်ရန်လမ်းကြောင်းရှာရန်ဖြစ်သည်။
The Nightmare mines ဂိမ်းသည်ဤစာရင်းမှအခြား Roblox ၏ကြောက်စရာဂိမ်းနှင့်မတူပါ။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်း၌ပိုမိုလုပ်ဆောင်လိုသူများအတွက်၎င်းသည်အကျိုးရှိသည်။ သငျသညျယနေ့သတ္တုတွင်းမြို့ Robloxia စမ်းနိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးကစားသမား (၉) ယောက်သည်ဂိမ်းကိုအတူတကွကစားနိုင်သည်။
၎င်းသည်ကစားသမားတစ် ဦး သည်မိုင်းတွင်းရှိအခြားကစားသမားရှစ် ဦး နှင့်ပိတ်မိနေသည့် multiplayer game တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အကြီးမားဆုံးနှင့်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသတ္တုတူးဖော်ရေးဂိမ်းတွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် Roblox နှင့် Minecraft အကြားကွာဟချက်ကိုကျဉ်းမြောင်းစေသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည် AAA ဂိမ်းများကိုရိုက်နှက်မည့်အစားအခြေခံဂရပ်ဖစ်တွင်မြင့်မားစွာပျံသန်းသောကစားသမားများ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းအတွက်မြေသားကောင်းစေသည်။
7. ဖုတ်ကောင် Rush
၎င်းသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်စတင်ခဲ့သော Beacon Studio မှတီထွင်ခဲ့သော Zombie War Roblox ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ကစားသမားတစ် ဦး သည် Zombies ၏သက်ရောက်မှုမရှိဘဲမိမိ၏လက်နက်များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးအထိရှင်သန်ရန်လိုအပ်သည်။ ကစားသမားတစ် ဦး သည်ဖုတ်ကောင်များကို ဦး ခေါင်းအတွင်းပစ်ခြင်းဖြင့်ပိုမိုပျက်စီးစေနိုင်သောကြောင့် EXP ပိုမိုရရှိနိုင်သည်။
Zombie Rush သည်ထူးခြားသော Roblox ၏ကြောက်စရာဂိမ်းဖြစ်သည်။ သငျသညျဖုတ်ကောင်ရိုက်ကူးဖို့သေနတ်များရ, ထိုသို့မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအတော်လေးပျော်စရာပါပဲ။ ဖုတ်ကောင်သည်သင့်ကိုတိုက်ခိုက်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဂရုမစိုက်ပါကကစားသမားများသည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။
၎င်းတွင် leveling system တစ်ခုပါ ၀ င်ပြီးရရှိသောလူအရေအတွက်ကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။
၎င်းသည်သတ်ဖြတ်မှုအရေအတွက်နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ အချို့သောလက်နက်များကိုသော့ဖွင့်ခြင်း၏ထူးခြားသောအရည်အသွေးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
လေထုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းတွင်ပြည့်စုံသောအမှုန်များ၊ အသံများနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းများပါဝင်ပြီး၎င်းသည်ထူးခြားသော Roblox အတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ Roblox ၏ကြောက်စရာဂိမ်းသည်နောက်ဆက်တွဲဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂရပ်ဖစ်တွေဟာပိုကောင်းပြီးပိုပျော်စရာကောင်းတယ်။ တစ်ကိုယ်တော်ဂိမ်းကိုကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်၎င်းသည်အတော်လေးပျော်စရာကောင်းသည်။
လူ ၈ ယောက်အထိဒီကြောက်စရာဇာတ်လမ်းကိုသင်ကစားနိုင်ပါတယ်။ စွဲငြိဖွယ်ကောင်းသောအသံအတွေ့အကြုံသည်ဂိမ်းကို ပို၍ ကြောက်စရာကောင်းစေသည်။ဗားရှင်းအသစ်သည်မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်သည်။ သင်ဟာအရုဏ်မတိုင်မီ spook တွေအများကြီးမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
မြေပုံများကိုဖုံးအုပ်ထားသောမြူများကိုလှိမ့်ခြင်း၊ နှင်းမြေပုံများတွင်ရွှဲရွှဲခြင်း၊ အမှုန်များကိုအလင်းရောင်နှင့်ရောနှောခြင်းစသည့်စွဲဆောင်မှုရှိသောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်ညအချိန်တွင်ကစားသမားများပိုမိုခက်ခဲစေသည်။
၎င်းသည်ကစားသမားများသည်အသက်ရှင်လွတ်မြောက်သူ (အရုဏ်မတိုင်မီအထိရှင်သန်နိုင်သူ)၊ သူရဲကောင်းသို့မဟုတ် slasher အဖြစ်ကစားသည့်ကစားနည်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကစားသမား ၁၀ ယောက်အနက်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ကစားသမား ၁၀ ယောက်ထဲမှကျပန်းဝက်ဝံအဖြစ်ရွေးချယ်ခံထားရသောလက်ရှိအဆိုးရွားဆုံးကစားသမား Roblox ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၅ မိနစ်အတွင်းတွင် Bear သည်အသက်ရှင်ကျန်သူအားလုံးကိုသတ်ပစ်ရမည်။ ဒါကြောင့်ဒီဇိုင်းမှကြွလာသောအခါဂိမ်းအတော်လေးလိုအပ်ပါသည်။
သင်အချိန်ဇယားသို့လက်နက်များထည့်သောအခါဒါဟာပျော်စရာပါပဲ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုလေ့လာရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည်။ ဂိမ်းသည်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုပုံမှန်ရရှိသည်။ သင်သည်လစဉ်မြေပုံသစ်တန်ချိန်များစွာကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
၁၀။ လူသတ်မှုနက်နဲခြင်း ၂
ဒါဟာ Nikilis ဖန်တီးတဲ့ထိတ်လန့်စရာဂိမ်းပါ။ ကစားသမားသည်အပြစ်မဲ့သူ၊ ရဲအရာရှိတစ် ဦး သို့မဟုတ်လူသတ်သမားဖြစ်နိုင်သည်။အပြစ်မဲ့သူတွေဟာလူသတ်သမားကိုပြေးပြီးပုန်းအောင်းနေပြီးလူသတ်သမားကိုဖော်ထုတ်ဖို့သူတို့ရဲ့စုံထောက်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ။ ရဲအရာရှိသည်သူ၌လက်နက်ရှိသည့်လူသတ်သမားကိုဖြုတ်ချခြင်းဖြင့်အပြစ်မဲ့သူများကိုကူညီသည်။
လူသတ်သည်လူတိုင်းကိုဖယ်ရှား။ ရဲအရာရှိ၏ရိုက်ချက်များမှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်သည်။ လူသတ်မှုနက်နဲသည့်ဂိမ်းတွင်မြေပုံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ နက်နဲသောအရာဖြစ်စဉ်ကိုဖြေရှင်းစဉ်သင်ထူးခြားသောအခြေအနေများတွင်ရှိနိုင်သည်။ ပျော်စရာစတင်သည်နှင့်အသုံးပြုသူများကိုအခန်းကဏ္ assigned ပေးသည်။
ဆာဗာတစ်ခုသည်လူသတ်သမားတစ် ဦး၊ ရဲအရာရှိတစ် ဦး နှင့်အပြစ်မဲ့ဆုံး ၁၀ ဦး ပါသောကစားသမား ၁၂ ယောက်အထိနေရာချနိုင်သည်။
Casual, Hardcore နှင့် Assassin ဟူ၍ သုံးမျိုးရှိသည်။ ဤရွေ့ကား Modes သာကစားသမားများကအချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၎င်း၏ဂိမ်းများကိုလူကြိုက်များလာခြင်းနှင့်အတူ Roblox သည်၎င်း၏အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးကစားနည်းအတွေ့အကြုံကိုသေချာစေရန်နေ့တိုင်းကြိုးစားအားထုတ်သည်။ Roblox သည်မည်သည့်ကျောက်တုံးကိုမှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲအမြဲတမ်းလက်သည်း၏ထိပ်ကိုထိသည်။ Roblox သည် Microsoft Playfab နှင့်ပူးပေါင်းပြီး၎င်း၏ backend platform တစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။
Roblox သည် Star Creator အစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်သည်။ အွန်လိုင်းကစားနည်းများကိုတိုးမြှင့်ပေးသော Youtubers အားဖန်တီးသူကုဒ်အားသူတို့၏ပရိသတ်များနှင့်မျှဝေရန်အားပေးသည်။ ကစားသူတစ် ဦး သည် Roblox ကိုသူတို့၏ code ကို အသုံးပြု၍ ၀ ယ်သောအခါအမြတ်၏အချိုးအစားသည် code ကိုအသုံးပြုသော Youtubers နှင့်မျှဝေသည်။ အကယ်၍ Roblox သည်လာမည့်အနာဂတ်တွင်နိုင်ငံတကာဂိမ်းကစားခြင်းအသိုင်းအဝိုင်းကိုနောက်အဆင့်သို့ပို့ဆောင်လိမ့်မည်။
Roblox ၏ကြောက်စရာဂိမ်းသည်မြေပုံများကိုလုံးလုံးလျားလျားထိန်းချုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သငျသညျ spook တွေအများကြီးရနှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဆောင်ပုဒ်ပျော်မွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဤစာရင်းတွင်ကြောက်စရာဂိမ်းများစွာရှိသည်။ သင်၏စက်ပစ္စည်းများ၌၎င်းတို့ကိုပျော်ရွှင်စွာခံစားခွင့်ရရှိစေရန်သင်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Roblox Promo ကုဒ်များနှင့်ဝီကီ
Roblox ရှပ်အင်္ကျီ Templates အကြံပြုချက်များ
ကျောင်းသားများအတွက် Adobe Creative Cloud - အထူးလျှော့စျေးကိုရယူပါ
TamilRockers (2020) - ဤဝဘ်ဆိုက်အသစ်သည်လုံခြုံရန်အတွက်လား။
mac အတွက် video to mp3 converter
အခမဲ့ရုပ်ရှင်များကိုသင် download လုပ်နိုင်သည်
မင်းပျင်းတဲ့အခါကြည့်ဖို့ ၀ က်ဆိုက်တွေ
အခမဲ့ရုပ်ရှင် ၁၂၃ ကားအသစ်ထွက်သည်